सामूहिक प्रयासमा कालिजपालन शुरु, कालिजको कति पर्छ ? | Radio Nepal | रेडियो नेपाल
सामूहिक प्रयासमा कालिजपालन शुरु, कालिजको कति पर्छ ?
रेडियो नेपाल २०७६ भदौ १९ गते १२:४९
बनेपा / विभिन्न पेशामा संलग्न युवाको समूहले काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–१४ इटापु साँगामा व्यावसायिकरूपमा कालिजपालन शुरु गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र दोलखामा विभिन्न व्यापार÷व्यवसाय गर्दै आएका आठ जनाको समूहले ‘नासिका वायल्ड एण्ड क्याटल प्रोडक्ट प्रालि’ स्थापना गरी व्यवसाय थालेको हो ।
बेल्जियमबाट अण्डा ल्याई नेपालमै ह्याचरीमार्फत कोरलेको चल्ला (कालिज) अहिले व्यावसायिकरूपमा पाल्न थालिएको हो । भीमेश्वर नगरपालिका–७ चरिकोटका केसी प्रतिकालिज रु तीन हजारदेखि रु चार हजारसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ । पहिलो पटक पोखरामा व्यावसायिकरूपमा कालिजपालन गरेको देखेपछि साथीहरुसँग मिलेर व्यवसाय शुरु गरेको प्रालिका अध्यक्ष नवराज तिमल्सिनाले बताउनुभयो । “एक वर्ष भित्र १५ हजारदेखि २० हजार कालिज पु¥याउने लक्ष्य छ”, उहाँले भन्नुभयो । उक्त समूहले कालिजसँगै बाख्रापालनसमेत शुरु गरेको छ ।रासस